Yakachipa Dhirowa aruminiyamu chiwanikwa chakabudiswa zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Pamusoro kudhirowa maitiro ealuminium alloy
Yakarurama waya kudhirowa
Inoreva kugadzirwa kwemitsara yakatwasuka pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro nekukanganisa kwemishini.
Iyo ine iyo mbiri basa rekubvisa kukwenya pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro uye kushongedza pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro. Kune mhando mbiri dzekutwasuka kwetambo. Waya inoenderera uye waya wepakati. Kuenderera mberi kweshinda mapatani kunogona kuwanikwa nekukwasva mapads kana mabhureni esimbi isina waya kuburikidza nekuenderera mberi yakatwasuka-yakatwasuka-mutsara kukwiza pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro (senge yekumanikidza kukuya pasi pechinhu chiripo kana kushandisa planer kusungira tambo bhurasho pane aruminiyamu ndiro) . Nekuchinja dhayamita yewaya yesimbi isina simbi bhurasho, magadzirirwo emakobvu akasiyana anogona kuwanikwa. Maitiro epakati esiriki anowanzo gadziridzwa pamabhureki emuchina kana michina yekukwiza. Production musimboti: Seti mbiri dzekusiyanisa mavhiri anotenderera munzira imwechete anoshandiswa. Iyo yekumusoro seti inokurumidza-kutenderera kukuya roller, uye iyo yepazasi seti inononoka-kutenderera irabha roller. Iyo aluminium kana aluminium alloy ndiro inopfuura nepakati pemaviri seti e rollers uye inosvinwa kunze. Mitsetse yakatwasuka yepakati nepakati.
Random patani yekudhirowa
Icho chisina kujairika, chisina kujeka matte sirika pateni yakawanikwa nekufamba uye kukwiza aruminiyamu ndiro kumashure nekudzika pasi peiyo-inomhanya mhangura waya waya bhurasho. Iyi mhando yekugadzirisa ine yakakwira zvinodikanwa pamusoro pealuminium kana aluminium alloy mahwendefa.
Kazhinji, inogadzirwa pamushini wekutsvaira kana muchina wekuakwesha. Shandisa iyo axial kufamba yeboka repamusoro rekukuya rollers kukwesha pamusoro pealuminium kana aluminium alloy ndiro, Dhirowa patani yemafungu.
Iyo inonzi zvakare kutenderera kwemaziso, inova mhando yesilika pateni yakawanikwa nekushandisa cylindrical yakanzwa kana kukuya vhiri reyiloni kuisa pamushini wekuchera, kusanganisa mafuta ekupenda neparafini, uye kutenderera uye kupolisha pamusoro pealuminium kana aluminium alloy ndiro. Inonyanya kushandiswa pakushongedza kwekutenderera kwezviratidzo uye zvidiki zvekushongedza dials.
Iyo inoshandisa diki mota ine yakatenderera inonzwika pane shaft uye inoigadzirisa patafura, pamadhigirii makumi matanhatu kubva kumucheto kwetafura.
Uye zvakare, pallet yakarongedzwa neyakagadziriswa aluminium ndiro yekutsikirira tii inogadzirwa, uye polyester firimu ine mitsara yakatwasuka yakanamirwa pahwande kugadzirisa muedzo wemakwikwi. Uchishandisa kutenderera kwekunzwa uye kufamba kune mutsara kwechingoro, patambo patani ine hupamhi hwakaenzana inosvotwa pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro.
Basa realuminium chiwanikwa waya dhizaini
Mhedzisiro inowanikwa neiyi dhizaini ichave neakanaka kwazvo convex uye concave mhedzisiro. Dhizaini yewaya inzira yekugadzirisa. Nekuti paine kumwe kukwenya pamusoro pesimbi pamusoro, shandisa waya yekudhirowa muchina kuti uite zvinokwenenzvera pamusoro penzvimbo yese (kudzikisa kukora kwemadziro) - kufukidza zvimakwenya, zviri nani kuti us ( iko kuita). Asi kukwenya kunonetsa kudzivisa, saka anowanzo shandiswa. Kudhirowa kwete chete mabhurashi kubva anokwenya pamusoro peiyo aruminiyamu ndiro, asi zvakare ine mhedzisiro yekushongedza chitarisiko chealuminium ndiro. (Iko kune zvakare "kupisa kutsika" maitiro (anodized aluminium kuchinjisa), iyo inogona zvakare kuita zvakafanana kuitika pamusoro pepurasitiki zvikamu.)
Sezvo aruminiyamu alloy zvikamu zvinogona kunge zviri munzvimbo ine hunyoro yekushanda kana kuunganidzwa pamwe nezvimwe zvikamu zvezvinhu zvakasiyana, kuitira kuti uvandudze uye uve nechokwadi chekupfeka kuramba, ngura kuramba uye kuoneka kwezvikamu, magnesium alloy zvikamu zvinofanirwa kurapwa pamusoro. Iyo prereatment inokanganisa iyo inotevera yekumwaya. Munguva yekugadzirwa kwezvinhu, zvikamu zvacho zvinogona kunge zvakasvibiswa nezvimwe zvakasvibisa zvakaita semafuta, oxides, mafuta ekuzora uye nyaya yekunze, uye izvi zvakasara zvinosemesa zvinofanirwa kubviswa.
Kazhinji, iyo prereatment yealuminium alloy zvikamu zvinogona kukamurwa muzvikamu zvina: mechnical kuchenesa, solvent kuchenesa, lye kuchenesa, uye acid kuchenesa. Idzi nzira dzinogona kushandiswa chete kana musanganiswa. Teerera kune iko kuunzwa kwehasha hupfu nemvura panguva yekukorobha maitiro, uye kukorobha kunofanirwa kunge kuchipenya kwazvo!
Mashoko Aluminium, simbi isina simbi uye zvimwe zvinhu zvesimbi zvinogona kukweshwa uye kukwizwa
Kushandisa Zvinoenderana nezvinodiwa pakurapa kwakasiyana kwekupisa
Pashure: Nhema anodized 6061-T6 aruminiyamu chiwanikwa CNC machine zvikamu
Zvadaro: Electroplated aruminiyamu chiwanikwa michina zvikamu